Xiisad dagaal oo ka taagan degaan ka tirsan Gobolka Hiiraan – Banaadir Times
Xiisad dagaal oo ka taagan degaan ka tirsan Gobolka Hiiraan
By banaadir 24th April 2021 51 No comment
Xiisadan dagaal ayaa waxaa ay Maanta ka taagan tahay Degaanka Deefoow ee Waqooyiga Magaalada Beledweyne ee Xarunta Gobolka Hiiraan, waxaana ay u dhaxeeysa laba maleeshiyo Beeleed oo ku wada sugan degaankaas.
Wararka ayaa waxaa ay sheegayaan in xiisada ay salka ku heeyso dadka degaankaas oo ku kala qeybsamay dhismaha Buundo la sheegay in laga dhisayo Wabiga maro degaanka Deefoow si looga hortago fatahaada Wabiga Shabeelle.
Qof kamid ah dadka ku nool degaanka Deefoow ayaa sheegay inay soo wajahday cabsi ballararan oo ku aadan inay laba maleeshiyo dagaaamaan, kuwaas oo isku hor-fadhiya degaanka, isla markaana sababai karta inay dagaalamaan.
Masuliyiin kaTirsan Maamulka Dowlad degaanka Soomaalida Itoobiye ee Faafeer ayaa shalay Halkaas tagay, iyaga oo markii dambe kulamo ay laqaateen Odayaasha Labada dhinac aan wax nayijo ah laga gaarin.
Maamulka Hir-Shabeelle oo la sheegay inay Cashuureen Dhismaha Buundadan ayaan wali ka hadlin Xiisad dagaal ee kataagan degaanka Deefoow taaso Sababi karto Gacan ka hadal dhex-mara labada maleeshiyo Beeleed oo hubeysan.
Puntland oo Amaro Cusub kusoo rogtay Masaajidyada
Maxkamadeynta rag loo heysto dilkii Guddoomiyihii degmada Hodan oo bilaabatay
Cabdi Xaashi oo soo saaray habraaca doorashada Xildhibannada labada gole ee Gobolada Waqooyi
Madaxweyne Farmaajo oo dib ugu soo laabtay Muqdisho si uu u hortago Baarlamaanka
By banaadir 6th February 2021
Dhageyso: Jabhadda ONLF oo ka hadashay Socdaalka Madaxweyne Farmaajo ee ka tagay Eritrea